रोल्पाको गैरीगाउँमा वि`स्फो`ट, ४ जना बाल-बालिकाको निधन !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Hot News/रोल्पाको गैरीगाउँमा वि`स्फो`ट, ४ जना बाल-बालिकाको निधन !!
काठमाडौं– रोल्पाको त्रिवेणी गाउँ`पालिका–७ मा ब`म विस्फो`ट हुँदा ४ जना बाल-बालिकाको निधन भएको छ । त्रिवे`णी गाउँ`पालिका–७ गैरी गाउँमा विस्फो`ट हुँदा ४ जनाको निधन भएको गाउँ-पालिकाका अध्य`क्ष शान्त कुमार ओलीले जानकारी दिए ।
गाउँ-पालिका अध्य`क्ष ओलीका अनुसार बिहीबार साँझ बाख्रा चराएर घर फर्किने क्रममा ४ जना बाल`बालिका विस्फो`टमा परेका हुन् । विस्फो`टबाट चारै जनाको घट`नास्थ`लमै निधन भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय हो`लेरीबाट अहिले प्रहरी निरी`क्षकको टोली घट`नास्थल`तर्फ लागेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले स्था`नीय तहबाट घट`नाको विषयमा जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।‘घट`नाको विवरण हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ । विस्तृत बु`झ्नका लागि अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय होले`रीबाट प्रहरी निरी`क्षकको कमाण्डमा टोली घटना`स्थल`तर्फ गएको छ,’ रोल्पाका डी.एस.पी. चित्र-बहादुर गुरुङले भने ।